Shiinaha 3inch 12mm Orbital Sander Mini Variable Doorsoome Dual Waxqabadka Gawaarida Buffer Polisher DF12A soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Checheng
3inch 12mm Orbital Sander Mini Variable Speed ​​Speed ​​Dual Action Laba Buffer Polisher DF12A
Shayga MAYA: CHE-DF12A
12mm 3inch mini DA polisher-ka waa habka ugu aaminka badan uguna fudud ee lagu helo rinji kaamil ah. Waa awood ku filan xirfadle laakiin amaan ugu filan bilowga. Waxaad ku guuleysan laheyd natiijooyin aan nusqaan laheyn shaqada adag. Nalalkan 3inch ee wax lagu nadiifiyo waxaa loogu talagalay raaxada iyo xakamaynta. Waxay leedahay 900W matoor la isku halleyn karo oo siinaya awood aad u wanaagsan oo cadaadis qaado isla markaana dhaqso uga soo saarta cilladaha. Xakamaynta xawaaraha waxay siisaa xawaare isbeddel ah laga bilaabo 2500 illaa 6500 OPM, taas oo ka saarta calaamadaha wareegga iyo xoqida si deg deg ah oo nabdoon
2pcs 3in saxan taakuleyn, 1pc kwo, 1pc buug, 1pr buraashka kaarboonka
Hore: 5inch Car Polishher Polishing Machine Mashiinka 8mm Auto Wax Kaydinta DF8A
Xiga: Qiimaha ugu Fiican 8mm DA Baabuur Polisher 900W Orbital Sander Buffer DF8